Laba tareen ayaa ku dhacay Amsterdam, 136 dhaawacmay | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAYURUB31 NetherlandsLaba tareen ayaa ku dhacay Amsterdam, 136 dhaawacmay
Laba tareen ayaa ku dhacay Amsterdam, 136 dhaawacmay
23 / 04 / 2012 31 Netherlands, DUNIDA, GUUD, Headline
Dhanka caasimadda Holland ee Amsterdam, tareenka 2 waxa uu isku dhacey madaxiisa oo ku yaalla isla habeenkii hore. Shilalka ba'an, 56 aad ayuu u dhaawacmey waxaana 136 dhaawacmay. Shilkani wuxuu ka dhashay shil gaari oo udhaxeeya ciidamada 18.30 ee tareenka magaalooyinka iyo tareenka xawaaraha sare ee Nijmegen ilaa Saldhigga Sloterdijk ee caasimadda. Rakaabka tareenka ayaa lagu tuuray midig waxaana tegi jiray gudaha tareenka iyada oo uu xoojiyay shilka. Kooxo badan oo gargaar iyo samatabbixin ah ayaa gaaray goobta kadib markii shilka lagu soo wargaliyay mas'uuliyiinta. Dhaawacyada ka soo gaadhay gawaarida laba tareen oo, waaxda dab-damiska ayaa muddo yar ka soo kabatay shaqada kadibna loo qaaday isbitaal. Saraakiisha Isbitaalka, 136 ayaa ku dhaawacmay shilka 80 ee daaweynta bukaan-socodka ayaa yiri. 56 waxaa loo qaaday isbitaalada ambalaaska. Laba darawal oo tareen ah oo madax u socda ayaa ka mid ah dadka dhaawacmay. Inta badan dhaawacyada waxaa sabab u ahaa jab, burburin iyo jarid.
Shil ka dib, dadka sugaya inay u safraan Amsterdam iyo Schipol waxay u dhaqaaqeen baskooda. Shilkan, waxay tababareysaa 40-50 si ay u dhacdo xawaaraha dhacdada, tirada dhaawacyada ka hor intaan la diiwaangelin. Sababta shilka ayaan weli loo ogaan.
Elazig, laba tareen ayaa isku dhacey madaxa; 8 dhaawacmay
Koonfur Afrika laba tareen ayaa la burburiyay ugu yaraan 50 dhaawacmay
Laba taraam ayaa ku dhacay Fatih: 8 dhaawacmay
Yenibosna Chobançeşme laba metrobus ayaa isku dhacay, dhaawacmay
Laba tareen ayaa ku dhacay Elazig!
Tareenka laba-xawaare ah ayaa ku dhacay magaalada Vienna (Sawirka Sawirka)
Laba tareen ayaa ku dhacay France
Laba tareen ayaa ku dhacay India
Laba tareen oo Manisada ah ayaa isku dhacey madaxa
Laba tareen ayaa ku dhacay Jarmalka
Laba tareen ayaa ku dhacay Austria
Laba tareen ayaa ku dhacay Angola 17 dhintay
TABABBARKA GARGAARKA SHARCIYADA
Qaybta amniga ee la saaro tareenada rakaabka, wanaajinta amniga ammaanka
Tareenka Xawaaraha Sare ee Spain: AVE